आफ्ना लागि दैनिक १० मिनेट पनि नदिने? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य आफ्ना लागि दैनिक १० मिनेट पनि नदिने?
२३ भाद्र २०७४, शुक्रबार १७:१९
पछिल्लो समय उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, मधुमेहजस्ता रोग सामान्य भइसकेका छन्।यसको अर्को कारण पनि छ-हामी स्वादे जिब्रोको बहसमा छौं। तलतल थाम्न सक्दैनौं। जिब्रोलाई मीठो–मीठो चिज खुवाएर पुल्पुल्याउँछौं। शरीरलाई परिश्रमबाट जोगाएर पुल्पुल्याउछौं। शरीर र जिब्रो जति पुलपुल्यायो त्यति मात्तिन्छ।
एकै ठाउँ बसी–बसी काम गर्ने शहरीया शरीरलाई व्यायाम पुग्दैन। परिणाम– उमेर ढल्किँदै जाँदा हाम्रो शरीरमा रोगले गुँड लगाइसकेको हुन्छ।उसो भए गर्ने के त-खानै छाड्ने? शहरै छाड्ने? तनाव भयो भनेर कामै छाड्ने?
होइन। खानपिन र शारीरिक परिश्रमको उचित संयोजन गर्ने। आज यो लेखमा हामी शारीरिक परिश्रमको कुरा गर्नेछौंधेरैलाई लाग्ला-शारीरिक परिश्रम गर्ने समय कहाँ पाउनु, जाँगर कहाँबाट जुटाउनु? ठीक छ-तपाईं दिनको दश मिनेट व्यायाम गर्ने समय, जाँगर र धैर्यता जुटाउन सक्नुहुन्छ होला नि? आफ्ना लागि दश मिनेट त निकाल्न सक्नुहुन्छ नि?
५. उड चपः यो व्यायामको अंग्रेजी नामको अर्थ ‘काठ काटनु’ हो। यो व्यायाम पनि त्यसरी नै गरिन्छ। उभिएर गरिने यो व्यायाम अझै प्रभावकारी बनाउन तपाईंले २/३ किलोको डम्बबेल पनि लिन सक्नुहुन्छ। नभए पानी भरिएको डेढ/दुई लिटरको बोतल वा कुनै बल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिन्छ नै भन्ने होइन, हुँदा सहज र प्रभावकारी हुन्छ।
तपाईंको काम गर्ने क्षमता बढ्छ, खुशी थपिन्छ। आफ्ना लागि दैनिक दश मिनेट नछुट्याउने त? setopati.com
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमको सहयोगम
Previous articleबालबालिकालाई इन्टरनेटको कुलतबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ ?यस्ता छन् उपाय-
Next articleसामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई सम्मान